ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: October 2008
တံငါးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည့် တံငါးသည်မိသားစုသည် ။ ရေကိုမှီ၍ ရေထဲကရသည့် ငါတွေကိုရောင်းချကာ ဘ၀အသက် ဆက်ရှင်ဖို့ နေ့နေ့ညည လုပ်ကိုင်ကြရပါတယ် ။ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် လုပ်ကိုင်ကြရပြီ ဘ၀ကိုရှင်သန်ဖို့ ရပ်တည်ကြရပါတယ် ။ ကွန်ဒိုင်းရွာသည် လယ်သမားအနည်းစု
သာရှိပြီ အဓိက တံငါးလုပ်ငန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည် ။ ဦးစွာ ကွန်ဒိုင်းရွာ တည်ရှိသည့်နေရာကို အနည်းအကျဉ်းဖော်ပြရန်လိုပါသည် ။ ကွန်ဒိုင်းရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ၊ ဒေးဒရဲမြို့ပိုင်ဖြစ်ပါသည် ။ ရွာငယ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆဲဟုခေါ်သောရွာကြီး၏ လက်အောက်ခံရွာငယ်လဲ ဖြစ်သည် ။ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွေ တည်ရှိပြီး ရေလမ်းခရီးဖြစ် သွားရသည် ။ ရန်ကုန်ကနေ၍ ဒေးဒရဲ ( သို့မဟုတ် ) ကွမ်းခြံကုန်းမှနေ၍ လှေ ၊ စက်လှေဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည် ။
တံငါးလုပ်ငန်းသည် ရေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြစ်ထဲ ၊ ချောင်းထဲ ၊ ပင်လယ်ထဲသို့ပင် ကြောက်ရွံ့မှုမရှိ လှိုင်းကြားထဲတွင် ဘ၀ကိုရုန်းကန်ကြရပါသည် ။ကွန်ဒိုင်းရွာနှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် အဓိက ဖမ်းမိသော ငါးများမှာ ငါးသလောက် ၊ ငါးဒန် ၊ ငါးပုတ်သင် ၊ ငါးပုံနား ၊ ကာကတစ် ၊ ငါးဇရိုင်း ၊ ငါးခူး နှင့် ပုဇွန်အမျိူးမျိုးတို့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဈေးအကောင်းဆုံးမှာ ငါးသလောက်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည် ။ ငါးသလောက်တွင် ရိုးရိုး ၊ ရှယ် ၊ အလတ် ၊ မောလ်ဒယ် ဟုခွဲခြားထားပါသေးသည် ။ “ ရှယ် ” ကို ကိုးဆယ်ငါးကျပ်သားသတ်မှတ်ထားပြီး “ အလတ် ” ကို ခြောက်ဆယ်သား အထက် ကိုးဆယ်သားအထိသတ်မှတ်ထားပါသည်။ “ ရိုးရိုး ” ကိုတော့ ခြောက်ဆယ်သားအောက် မှ လေးဆယ်သားအထိသတ်မှတ်ထားပါသည် ။ “ မောလ်ဒယ် ” ဆိုသည့် ငါးသလောက်မှာတော့ ပိန်ပိန်လေးဖြစ်ပြီ အရမ်းကိုကဗျာဆန်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဈေးမကောင်းပါ အရိုးများ၍ ဖြစ်သည် ။ တစ်ခုပြောပြရန်ကျန်ပါသေးသည် ငါးသလောက်ထဲတွင် ဘိန်းစားဆိုသည့် ငါးသလောက်လဲရှိပါသေးသည် ။ ထိုငါးသလောက်မှာ အကောင်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ၀၀လင်လင်မရှိပဲ ချိန်းခွင်တွင် ချိန်းလိုက်ပါက အလွန်ပင် အလေးချိန်နည်းပါသည် ။ထို့ကြောင့် ထိုငါးသလောက်ကို ဘိန်းစားဟု ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
တံငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသော ရေလုပ်သားကြီးများမှာ အဓိက ဖမ်းသည့် ငါးမှာ ငါးသလောက်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ငါးသလောက် “ ပိုက် ”လို့ သူတို့ငါးဖမ်းသည့် ရေလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာကို ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည် ။ ငါးသလောက် ပိုက် ကိုရေထဲသို့ချ၍ ငါးဖမ်းရသည် သို့ရာတွင် ငါးဖမ်းရာ၌ လူနှစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ငါးသလောက်ပိုက်၌ ခေါင်းကြိုး ၊ ခဲကြိုးဟူ၍ ရှိပါသည် ။ ပဲ့စီးဟုခေါ်သော လှေခေါင်းဆောင်နှင့် ဦးစီးဟုခေါ်သော လက်အောက်ငယ်သာတစ်ဦး ပေါင်း နှစ်ဦးမှသာ ငါးသလောက်ပိုက်ကို ရေထဲသို့ပစ်ချ၍ ရပါသည် ။ သို့မဟုတ်ပဲတစ်ဦးတည်းပစ်ပါက မလွယ်ကူနိုင်ပေ ။ ပင်ပင်ပန်းပန်းဖြစ်လုပ်ကိုင်ရ
မည်ဖြစ်သည် ။ တချို့ရေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ရေလုပ်သားကြီးများသည် လူငှား၍မရသောလည်းကောင်း ၊ မိမိ မိသားစုမှ ဦးစီးလိုက်မည့်သူမရှိသောကြောင့် မိမိဘာသာ တစ်ယောက်တည်းမြစ်ထဲ၌ ပိုက်ချလေ့ရှိပါသည် ။ “ ပိုက် ” ပစ်ရာတွင် ရေချိန် ကိုကြည့်၍ အသုံးချပါသည် ရေတက်ရေကျ ပေါ်မူတည်၍ မိမိတို့ ငါးရှာသောအရာကို သချာင်္ဆန်ဆန်တွက်ချက်၍ ထားပါသည် ။ ထိုသို့တွက်ချက်ပြီး ရေချိန်ကိုကိုက်၍ ငါးဖမ်းမှသာ ငါးတို့၏ နေပုံသွားလာပုံ သူတို့လှုပ်ရှားအစားရှာခိုက်ဖြစ်မှသာ ပိုက်ထဲသို့ငါးတိုး၍ ငါးရမည်ဖြစ်ပါသည် ။ ပြီလျှင် ရေအောက်ရှိမမြင်နိုင်သော သစ်ငုတ် ၊ ကျောက်ဆောင်ငုတ် စသည့် ပိုက်ကိုညှိစေသော အရာများ၏ တည်နေရာကိုလဲအသေအချာမှတ်ထားရပါသည် ။ ထိုအတူပဲ ရေအတက်အကျပေါ်မူတည်၍ ထိုငုတ်များကို ရှောင်ရှားရပါသည် ။
ငါးဖမ်းခြင်း လုပ်ငန်းမှာ ပင်ပန်း၍ မလွယ်ကူပေ ။ ငါးသလောက်ပိုက် ကိုရေထဲသို့ချယုံနှင့် ငါးဖမ်းလို့မပြီးသေးပါ ။ မိမိနည်းတူ ရေလုပ်သားများ၏ ပိုက်များမှာလဲရေထဲတွင် ရေသယ်ရာနောက် လိုက်ပါမျောနေသည့်အတွက် ပိုက်တခုနှင့်တခု ပူကပ်ကာ ညှိခြင်း ၊ ပိုက်ရေထိုး၍ ပိုက်လုံးခြင်းဟုခေါ်သော ပိုက်ခေါက်၍ရှုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် ရေလုပ်သားများမှာ မိမိတို့ငါးဖမ်းရန်ရေထဲသို့ မျောထားသည့် ပိုက်အား လှေပေါ်မရောက်မချင်း စိတ်မအေးစွာ စောင့်ကြည့်နေရပါသည် ။ ငါးဖမ်းရာတွင် ညဘက်သည် ငါးဖမ်း၍ ငါးအရဆုံးဖြစ်ပါသည် ။ နေ့ဘက်တစ်ကောင်ရလျှင် ညဘက်နှစ်ကောင်ရဖို့ပိုသေချာသည် ။ နေ့ဘက်မှာ တစ်ကောင်မှ မရပါက ညဘက်တစ်ကောင်လောက်တော့ရနိုင်သေးသည် ။ ထို့ကြောင့် ရေလုပ်သားကြီးများသည် ညဘက်ကိုပို၍ အလေးထားကာ ငါးရှာလေ့ရှိပါသည် ။
ငါးဖမ်းရာတွင် အများစု ဆင်းရဲသော ငါးဖမ်းသမားများမှာ လှေကိုရွေ့အောင် လှော်တက် ၊ ခက်တက်ဖြင့် အသုံးပြု၍ သွားလာကြရပါသည် ။ တချို့တက်နိုင်သောလှေလုပ်သားကြီးများမှာ ဟွန်းတာစက်များသုံး၍ လွယ်ကူသက်သာစွာ သွားလာငါးဖမ်းကြပါသည် ။ မြစ်ထဲတွင် ငါးဖမ်းကြသော ရေလုပ်သားများမှာ ရာသီဥတုအ
ခြေအနေကိုလည်း အထူးသတိရှိရှိနှင့်နေရပါသည် ။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်ပါက လှိုင်းဒဏ်လေဒဏ် မိုးဒဏ်တို့ကိုမကြာခဏခံကြရပါသည် ။
ကွန်ဒိုင်းရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်နှင့်အညီ ဧရာဝတီကိုအမှီပြု၍ နေထိုင်စားသောက်ကြရသည်လို့ ပြောရင်မလွဲနိုင်ပေ ။ ဒါကြောင့် ဧရာဝတီသည် သူတို့၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံပြောချင်ပါသည် ။ ဧရာဝတီတိုင်းနေလုပ်သားပြည်သူများမှာ အဓိက ရေလုပ်ငန်းနှင့် စပါးလယ်ရာ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည် ။ ကွန်ဒိုင်းရွာကိုနာဂစ်ဆိုတဲ့ လေနီကြမ်းရုတ်တရပ်ဝင်လာချိန်မှာတော့ညဘက်ဖြစ်သည်။ရွာရှိအိမ်များအပြိုပြိုအပျက်ပျက်နှင့်ကူပါကယ်ပါပေါ့
ကူသူမရှိကယ်သူမရှိနှင့်သူတို့ချစ်တဲ့ဧရာဝတီနဲ့အတူ တချို့တွေ ထာဝရအိပ်စက်သွားကြတယ်လေ ။ ရွာပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာကအိမ်ရှိတိုင်းငုတ်တချို့နဲ့လူတချို့သာပေါ့၊စားစရာဆိုတာမရှိရိက္ခာပြတ်လပ်၍ဒုက္ခ
တွေကို ထင်ပေါ်နေပါတယ် ပြီတော် အပြုံးပွင့်တွေနဲ့ အပြုံးရိပ်တွေရောယှက်ကာ သူတို့မျက်နှာမှာ ကြည်လင်ဝင်းပနေပါတယ် ။ ဒါကိုမြင်ရသူအဖို့ စိတ်နှလုံးမှာ ပီတိတွေဖြာကာ စိတ်အဆင်မှာ ငါတို့လူတွေ့ရဲ့အသက်ကို အကုန်မကယ်နိုင်တာမှ တချို့အသက်တွေကိုတော့ ကယ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့လို့ စိတ်
ကူးမိတယ်လေ ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ စိတ်ကူးမှုမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ တကယ့်ကိုအသက်တွေကို ကယ်ခဲ့တာပါ ။ ဒီရွာတွင်မကပါဘူး ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းရှိရွာတော်တော်များများနှင့် မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များကိုလဲ လှူခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် ။ ဧရာဝတီတိုင်းတွင်ပင် ရေလမ်းခရီးမှနေ၍ ခက်ခဲစွာသွားလာပြီ ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်သလောက် နိုင်တဲ့ဝန်နဲ့ ကူပြီ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုခဲ့ပါတယ် ။ အခုဆိုရင်ကွန်ဒိုင်းရွာကိုအိမ်ခြေတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းပင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်
ပါသည် ။ ငါးဖမ်းရန်အတွက် စက်တက်ထားသည့် လှေနှစ်စီးကိုလဲ လှူဒါန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် ။ အတိုချုပ်ရမည့်ဆိုသော အခုဖော်ပြထားခြင်းသည် အတိုချုပ်မျှသာဖြစ်ပါသည် ။
Posted by mhyaw lint at 9:18 PM
အော် . . . မိုးစက်မိုးပွင့်တို့လဲ
လွမ်းမောဖွယ် ကောင်းလိုက်ပါပေ၏ . . .။
သို့ပေမဲ့ . . .
အလွမ်းပန်းတို့ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး ။
ချစ်သူရယ် . . .။
Posted by mhyaw lint at 8:12 AM
ငါ့ဘ၀လဲ ပျက်လုနီးပါပြီ . . .
အလွမ်းများနဲ့ ဇာတ်သိမ်းရတော့မလိုဖြစ်နေပြီမိန်းခလေးရယ် . . . ။
Posted by mhyaw lint at 7:18 PM
ချစ်မှာပါ … … …
ငါဆုတောင်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါချစ်သူ .. .. …
Posted by mhyaw lint at 8:55 AM
ဒါနဲ့ …. …..
ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ကားဂိတ်မှာထိုင်စောင့်နေမိတယ် …
ဟော …. သူလာပြီ
ဆီကြိုလေရဲ့ … …
စောင့်နေခဲ့တာပါ .. ..
အခု သူနဲ့တွေ့ရပြီ . . .
တချက်လှည့်ကြည့်လို့ . . .
အော် . . . အဖော်များပါလာသေးလားလို့
ဆင်းလာပါတော့တယ်. . .
ငယ်ရယ် . . . မရက်စက်ပါနဲ့ဟာ
ချစ်သူ မျက်နှာအပြုံးရိပ်တချို့ပြိုကျလာပါတော့တယ် . . .
ငါလေ .. .. ပျော်လိုက်တာ
ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းလေအပ်ထားလေရဲ့ . . .
ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ် . . .
သူနဲ့ ဆုံစည်းရပါလို့၏ပေါ့ . . .
ချစ်သူစုံတွဲ “ မျှော်လင့်မိုးစက် ”ဓါတ်ပုံလေးက
ဟော … …
ရင်ခွင်ဟက်တက်ကို စောင်ဖုံးပြီးအိပ်လိုက်ပါတော့တယ် ….
Posted by mhyaw lint at 8:53 AM
သူ့ကို လွမ်းတဲ့စိတ်တွေလျော့ချမှဖြစ်မယ် .. ။
ငါအငိုတိတ်မှ ဖြစ်တော့မယ် .. ။
ဥပေက္ခာပြုမေ့ဖြောက်မှ ဖြစ်တော့မယ် .. ။
မနည်းတော့ပါဘူး .. ။
မင်းကိုဆက်ပြီးရင်ခုန်ချင်လို့ပါ .. … .. ။
Posted by mhyaw lint at 6:38 AM
ရွက်လွှင့်မိလိုက်တော့ … … …
ဟော …. ကျွန်တော်လန်းဆန်းလာပြီ
မတွေးမိခဲ့ပါဘူး …. … ….
ခိုလုံနေခဲ့မိပါတယ် .. … .. ။
Posted by mhyaw lint at 6:19 AM
သေချာပါတယ် ... နင်မပါရင်တောင်
Posted by mhyaw lint at 4:58 AM
ငါ့ကိုချုပ်နှောင်း မပေးတော့ဘူးလား ။
လက်တစ်ချက်ပြကာ နုတ်ဆက်သွားပါလေရဲ့ …. … … ။
Posted by mhyaw lint at 4:42 AM
တွေ့ဆုံခွင့်ပေး တဲ့ ကံကြမ္မာရယ်
ခိုလုံခွင့် ပေးပါလား ….
ပေးဆပ်ခြင်းတွေနဲ့ မင်းကိုလက်ထိုးရမလဲ ….။
ရပ်တန့်ပေးပါတော့ … … …။
အဲ့ဒီတော့ …. ….
ချစ်သူ ငယ်ရယ် …… ။
Posted by mhyaw lint at 4:33 AM
Posted by mhyaw lint at 2:39 AM